အိပ်နေစဉ်မှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း (Sleep Sex) ဆိုတာဘာလဲ - Page 12 of 27 - Hello Sayarwon
အိပ်နေစဉ်မှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း (Sleep Sex) ဆိုတာဘာလဲ
အိပ်နေစဉ်မှာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိပ်နေစဉ်မှာ စကားပြောခြင်းနဲ့ အိပ်ပျော်နေစဉ် ကားမောင်းခြင်းတွေဆိုတာ အဖြစ်များတဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလို ဝေဒနာတွေကို ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကြုံဖူးကောင်း ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဖြင့်ရင် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ။ အိပ်စက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဆိုတာ ပုံမှန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်းကောင်း မအိပ်စက်နိုင်တဲ့ ဝေဒနာ တွေကိုခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်သလို စိတ်ဖိစီးမှု များတဲ့အခါမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ ဒီလို အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါ၊ အလုပ်တွေ အရမ်းများတဲ့အခါ၊ တစ်ခြားသော ပြင်ပ အကြောင်းရင်းများနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အိပ်စက်ဆိုင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ အမြဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာဝေဒနာ စွဲစွဲမြဲမြဲဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အိပ်စက်ဆိုင်ရာပြဿနာ အပေါ်မူတည်ပြီး အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နေကုန် ပင်ပန်းနေတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်ခြင်းဟာ ခွန်အား နည်းပါးခြင်း၊ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ရောဂါများနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းခြင်းကြောင့် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာဆိုရင်တော့ ဒီရောဂါအတွက် ကုသမှု ခံလိုက်ရုံနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံပြောင်းခြင်း ဖြင့် ကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အိပ်စက်ခြင်း ပြဿနာတွေထဲမှာမှ မိတ်ဆွေအတွက် မရင်းနှီးသေးတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း (sleep sex) or (sexsomnia) ပါပဲ။ အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ အိပ်ပျော်နေစဉ် လမ်းလျှောက်ခြင်းလိုပဲ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာမူမမှန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ရခြင်းဟာ ဦးနှောက်က အိပ်စက်ခြင်း အဆင့်အကူးအပြောင်းမှာ ပုံမမှန်ဖြစ်လာပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်စေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Sexsomnia ကို အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းလို့လည်း လူသိများပြီး မျက်စိမလှုပ်ရှားသေးတဲ့ အိပ်စက်ခြင်း အဆင့် (non rapid eye movement (NREM)) မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိမလှုပ်ရှားသေးတဲ့ အိပ်စက်ခြင်း အဆင့် (non rapid eye movement (NREM)) ဆိုတာဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ အိပ်စက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှု များစွာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ REM နဲ့ NREM အဆင့်တွေကြား ကူးပြောင်းသွားလာနေပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်စတင်အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ NREM အဆင့်လာပါတယ်။ NREM အဆင့်မှာမှ ၃ ဆင့်ရှိနေပါတယ်။ ပထမဆုံး ဖြစ်ပေါ်တဲ့ NREM အဆင့်ကို Stage N1 လို့ခေါ်ပြီး ဒီအဆင့်က ၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ် ကြားကြပါတယ်။ Stage N1 မှာဆိုရင် မျက်လုံးတွေက မှိတ်နေပေမဲ့ သင့်ကို အလွယ်တစ်ကူ နှိုးလို့ရပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာ အဆင့် ၂ Stage N2 လာပါတယ်။ Stage N2 အဆင့်မှာဆိုရင် သင်ဟာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘဲ နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးလာကာ ခန္ဓါကိုယ် အပူချိန်ကလည်း ကျသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်ဖို့ အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲ့နောက် အဆင့် ၃ Stage N3 ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒီအဆင့်ဟာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီအဆင့်မှာ သင့်ကို နှိုးဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာဆိုရင် နှလုံးခုန်နှုန်း နဲ့ အသက်ရှုနှုန်းတို့ အနည်းဆုံး ကျဆင်းသွားပြီး သွေးဖိအားတွေနဲ့ ခန္ဓါကို အပူချိန် နည်းသွားကာ ဒီအဆင့်မှာ မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုလည်း မရှိပါဘူး။ ဒီအဆင့်မှာ ခန္ဓါကိုယ်က တစ်ရှုးတွေကို ပြန်လည်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အရိုးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားဖြည့်ခြင်းစတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ အထက်က အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ အများဆုံး ဖြစ်ပွားပါတယ်။ NREM အဆင့် ၃ ဆင့်လုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသွားရင် REM Sleep အဆင့်ရောက်လာပါတော့တယ်။ ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ရမယ့် REM အဆင့်ဟာ ပုံမှန် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာပြီး အိပ်ချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ REM အဆင့်က တစ်ဖြည်းဖြည်းကြာလာပြီး နောက်ဆုံး အဆင့်မှာဆိုရင် REM အဆင့်ဟာ ၁ နာရီခန့် အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ REM Sleep အဆင့်မှာဆိုရင် နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ အသက်ရှူနှုန်းက မြန်လာပြီး အဲ့ဒီအဆင့်မှာ ဦးနှောက်က ပိုအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် အိပ်မက်တွေကို ဒီအဆင့်မှာ မက်လေ့ရှိပါတယ်။
အိပ်နေစဉ်မှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ
Sexsomnia ဟာ လိင်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင့် အိပ်မက်မက်ခြင်းဟာ လူငယ်တွေနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး လူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိပ်မက်နဲ့ Sexsomnia နဲ့ မတူပါဘူး။ Sexsomnia ဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေဟာ အိပ်နေစဉ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို လုပ်ဆောင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sexsomnia ရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက ဒီဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ ဒီကိစ္စတွေ လုပ်လို့ လုပ်မှန်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး သိလာမှာက အိမ်ထောင်ဖက်တွေ၊ အခန်းဖော်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက အရင်သိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လူသိဖို့ အတွက် သူတို့ကို နှိုးမှသာ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sexsomnia ရဲ့ အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့-
အတူတူ အိပ်နေတဲ့ လူရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေကို လာရောက်ထိတွေ့ပြီး လိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်း၊
အလိုအလျောက် လိင်စိတ် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်း၊
ဒီအပြု အမူတွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း မျက်လုံးက အသက်မပါခြင်း၊
နိုးလာတဲ့အချိန် ဒီဖြစ်ရပ်ကို မမှတ်မိခြင်း၊
ဒီလို အိပ်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာကို နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ မမှတ်မိဘူးဆိုရင် ဒါဟာ Sexsomnia ရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sexsomnia ခံစားနေရတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်လုံးဟာ ပွင့်နေပြီး နိုးနေသကဲ့သို့ပဲ လိင်ဆက်ဆံမှုကို လုပ်ဆောင်တတ်ကြပေမဲ့ အတိတ်မေ့တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရပြီး ဘာမှမှတ်မိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံချိန် ပုံစံပြောင်းလဲနေခြင်းကလည်း Sexsomnia အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ပြနေပါတယ်။ Sexsomnia ခံစားနေရတဲ့လူတွေဟာ အိပ်နေတဲ့အချိန် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ သာမန်ထက်ပိုပြီး ခွန်အားပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ အိပ်ပျော်နေတဲ့အတွက် အရှက်အကြောက်နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာကို အိမ်ထောင်ဖက်က တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ။
ဘာကြောင့် Sexsomnia ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါ အချက်တွေကြောင့်တော့ Sexsomnia ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော ဆေးဝါးများကြောင့် ၊
ဆရာဝန်က မညွှန်ကြားထာတဲ့ ဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းကြောင့်၊
အိပ်စက်ပုံစံ အဆင့်ဖြတ်သန်းပုံမမှန်ခြင်းကြောင့် တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဝါကုသမှု ခံယူနေတဲ့အခါမှာလည်း Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို အချက်တွေကတော့-
အိပ်စက်ချိန် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ပြဿနာများဖြစ်တဲ့ အိပ်နေစဉ်စကားပြောခြင်း၊ အိပ်နေစဉ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊
အိပ်ပျော်နေစဉ် ပင်မ အာရုံကြော စနစ်ကြောင့်ခြေထောက်များ လှုပ်ခြင်း၊ (Restless legs syndrome (RLS))၊
အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်များ အစာရေမြိုပြွန်ထဲရောက်လာပြီး အစာရေမြိုပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း (astroesophageal reflux disease (GERD))၊
ခေါင်းကိုက်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ခံစားနေရတဲ့ လူ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာ သေချာမသိရသေးပေမဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ရှားပါး ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လေ့လာချက်အရ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေထဲမှာ (Sexsomnia) အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ လူနာက ၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ၃ ဆ မျှ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ အာသာ ဖြေကြတာ ပိုများပါတယ်။ Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ လူတွေကတော့ ရှက်ကြောက်တာက တစ်ကြောင်း၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်တာကတစ်ကြောင်း ဆေးရုံလာပြကြတာ နည်းပါတယ်။
ကိုယ်အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ ကိုယ်မသိဘဲ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်နေမိနေတယ်ဆိုတာ စိုးရိမ်စရာ ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ တစ်ချို့သော Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဆိုင်ရာ အပြုအမူတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းလို ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ ကိစ္စမရှိပေမဲ့တစ်ဖက်သားက တစ်စိမ်း ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ကြံစည်ခြင်း အထိ ပြစ်မှုမြောက်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်တွေမှာဆိုရင်လည်း ဒီလို အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အိမ်ထောင်ဖက်က သူဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျော်ရွှင်မှု မရဘူးလို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ မိသားစုက ဒီလို မူမမှန်တဲ့အပြုအမူတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သင့်ကိုပြန်ပြောပြရင် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ထံမပြခင်မှာ သင့်မိသားစု၊ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမေးမြန်းပြီး သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုအရင် မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မှတ်သားထားခြင်းက ဆရာဝန်တွေ စစ်ဆေးဖို့ ပိုလွယ်ကူစေလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဆရာဝန်များက သင့်ရဲ့ အိပ်စက်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှူတဲ့ ပုံစံ၊ မျက်လုံးနဲ့ ခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို တိုင်းတာပြီး ဝေဒနာခံစားနေရလားဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာကို အောင်အောင်မြင်မြင်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ကုသနည်းတွေကတော့-
အိပ်စက်ချိန်မှာ မူမမှန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ မူလဘူတ အကြောင်းရင်းများကို ကုသခြင်း။
Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဟာ တစ်ခြား အိပ်စက်ချိန်မှာ ဖြစ်ရတဲ့ ဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့ အိပ်ပျော်စဉ် အသက်ရှူရပ်ခြင်းနဲ့ အိပ်ပျော်နေစဉ် ပင်မ အာရုံကြော စနစ်ကြောင့်ခြေထောက်များ လှုပ်ခြင်း၊ (Restless legs syndrome (RLS))ကြောင့် ဖြစ်တာများပါတယ်။ အိပ်ပျော်စဉ် အသက်ရှူရပ်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေ အတွက်လည်း continuous positive airway pressure therapy လို့ခေါ်တဲ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပွင့်စေရန် မပျော့မပြင်းတဲ့ လေဖိအားပေးနိုင်တဲ့ စက်နဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
သင်ဆေးဝါး အသစ်တစ်မျိုးကို သောက်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှ Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာစတင်ခံစားလာရတယ်ဆိုရင် ဆေးဝါး ပြောင်းသောက်လိုက်ရုံနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ဆေးတွေဟာ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးခြင်းတို့ကလည်း Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအတွက် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံယူပြီး Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော ဆေးဝါးတွေက Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာကိုဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ လေသင်တုန်း ဖြတ်ခြင်းကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့ Sexsomnia ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Sexsomnia (အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဝေဒနာကို အထက်ပါ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပြီး တစ်ခြားသော အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေ ခံစားရမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ လျှော်ညီတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ မိသားစုနဲ့ ဆရာဝန်ထံ ပွင့်လင်းစွာပြောပြခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းဝေးအောင်နေထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခန်းသီးသန့်နဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ခြင်းတို့ဖြင့်လည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Accessed (21. July. 2018)
လူအများစုမသိသေးကြတဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အစေ့ (Clitoris) ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်